Sriyog.Com - End-User License Agreement
अन्त-प्रयोगकर्ता लाइसेन्स सम्झौता (EULA)
पछिल्लो अपडेट गरिएको: अगस्ट १६ , २०१९
यो अन्त-प्रयोगकर्ता इजाजत पत्र सम्झौता ("EULA") तपाई र Sriyog.Com बीच एक कानुनी सम्झौता हो । यो EULA समझौता तपाइँको Sriyog सफ्टवेयर ("सफ्टवेयर") को सीधा Sriyog.Com बाट वा अप्रत्यक्ष रूपमा Sriyog.Com मार्फत तपाइँको अधिग्रहण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दछ । अधिकृत पुनर्विक्रेता वा वितरक (एक "पुनर्विक्रेता")। कृपया यस EULA सम्झौता ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् स्थापना प्रक्रिया पूरा गर्नु अघि र Sriyog सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु अघि । यसले Sriyog सफ्टवेयर प्रयोग गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ र वारंटी जानकारी र दायित्व अस्वीकरण समावेश गर्दछ ।
योग्यता / उमेर
१८ बर्ष मुनिका जो कोही पनि Sriyog.Com मा सेवाहरू प्रदान गर्न वा प्राप्त गर्न अधिकृत छैनन् ।
तपाईले हामीलाई जानकारी प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ जुन सही, पूर्ण, र हालसालको खाता सिर्जना गर्दा सबै समयमा हुन्छ । Sriyog.Com मा यदि प्रदान गरिएको जानकारी भ्रामक वा गलत हो भने, यो सर्तहरूको उल्लङ्घनको रूपमा लिइनेछ, जसले हाम्रो सेवामा तपाईंको खातालाई तत्काल समाप्त गर्न सक्दछ ।
प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड जस्तो तपाईको खाता विवरणहरू सुरक्षित गर्न तपाई जिम्मेदार हुनुहुन्छ। तपाई आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्न सहमत हुनुहुन्छ र कुनै तेस्रो पक्षसँग सेयर नगर्न पनि सहमत हुनु हुन्छ । यदि तपाईंको खाता सम्झौता गरिएको छ वा कुनै सुरक्षा मुद्दाको मामिलामा छ भने तपाईंले तुरून्त हामीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो प्लाटफर्मको बुझाइ
कृपया यस EULA सम्झौता ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् स्थापना प्रक्रिया पूरा गर्नु अघि र Sriyog.Com सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु अघि पनि, यसले Sriyog.Com सफ्टवेयर प्रयोग गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ र वारंटी जानकारी र दायित्व अस्वीकरण समावेश गर्दछ ।
यदि तपाई Sriyog.Com सफ्टवेयरका लागि दर्ता गर्नुहुन्छ । यो EULA सम्झौताले यसलाई पनि सुशासन दिन्छ। "स्वीकार्नुहोस्" मा क्लिक गरेर वा स्थापना गरेर र वा Sriyog.Com सफ्टवेयर प्रयोग गरेर, तपाईं सफ्टवेयरको आफ्नो स्वीकृतिलाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ र यस EULA सम्झौताको सर्तहरूसँग बाध्य हुन स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ।
यस बाहेक हामी हाम्रो वेबसाइटमा सूचीबद्ध कुनै पनि सेवाहरूलाई कुनै बीमा वा आश्वासन प्रदान गर्दैनौं, न हामी हाम्रो प्लाटफर्म प्रयोगको लागि कुनै शुल्क लिनेछौं । यदि तपाइँ Sriyog.Com प्रयोग गरीरहनु भएको छ वा हाम्रो प्रयोगकर्ताहरुबाट कुनै सेवा प्राप्त गर्नको लागी, हामी तपाईंलाई कडा सिफारिश लिनको लागी सिफारिस गर्छौं साथै आवश्यक सावधानी र सुरक्षा आफैलाई रक्षा गर्ने उपायहरू अपनाउनुहोला । तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि प्रदायकहरूबाट कुनै पूर्वनिर्धारितताको मामलामा तपाईं हामीलाई जिम्मेवार मान्न सक्नुहुन्न । यदि तपाइँसँग कुनै नराम्रो अनुभव छ भने, कृपया गुनासो गर्नुहोस, हामी सो प्रदायकको बारेमा र हामी उनीहरूको खाताहरू समाप्त गर्न कारबाही लिनेछौं ।
Sriyog.Com ले यस EULA सम्झौताको सर्तहरू अनुसार तपाईका उपकरणहरूमा Sriyog.Com सफ्टवेयर प्रयोग गर्न तपाईलाई एक व्यक्तिगत, ट्रान्सफर योग्य, गैर-अनन्य इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ ।
डेलिभरी / भुक्तानी
तपाईको नियन्त्रणमा Sriyog.Com सफ्टवेयर लोड गर्न अनुमति छ (उदाहरणका लागि पीसी, ल्यापटप, मोबाइल, वा ट्याब्लेट)। तपाईको सिस्टमले Sriyog.Com सफ्टवेयरको न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भन्ने कुराको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तपाईले हामीलाई जानकारी प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ जुन सही, पूर्ण, र हालसालको खाता सिर्जना गर्दा सबै समयमा हुन्छ । यदि प्रदान गरिएको जानकारी भ्रामक वा गलत हो भने, यो सर्तहरूको उल्लङ्घनको रूपमा लिइनेछ । जसले हाम्रो प्लाटफर्ममा तपाईंको खातालाई तत्काल समाप्त गर्न सक्दछ । प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड जस्तो तपाईको खाता विवरणहरूको सुरक्षा गर्न तपाई जिम्मेदार हुनुहुन्छ । तपाई आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्न र कुनै तेस्रो पक्षसँग सेयर नगर्न सहमत हुनुहुन्छ । यदि तपाईंको खाता सम्झौता गरिएको छ वा कुनै सुरक्षा मुद्दाहरूको मामलामा, तपाईंले तुरून्त हामीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।
तपाईंलाई अनुमति छैन:
सम्पादन गर्न, परिवर्तन गर्न, परिमार्जन गर्न, अनुकूलन गर्न, अनुवाद गर्नवा अन्यथा सफ्टवेयरको सम्पूर्ण वा कुनै अंश परिवर्तन गर्नवा सफ्टवेयरको सम्पूर्ण वा कुनै अंशलाई अन्य कुनै सफ्टवेयरमा मिलाउन वा समावेश गर्न अनुमति दिनुहुनेछ वा विघटन, विच्छेदन वा रिभर्स इन्जिनियर सफ्टवेयर वा त्यस्ता कुनै पनि चीजहरू गर्ने प्रयास ।
पुन: उत्पादन, प्रतिलिपि, वितरण, पुन: बेच्न वा अन्य कुनै पनि व्यावसायिक उद्देश्यको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
कुनै पनि तेस्रो पक्षको तर्फबाट वा कुनै तेस्रो पक्षको फाइदाको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अनुमति छैन ।
सफ्टवेयरको कुनै पनि हिसाबले प्रयोग गर्न जुन कुनै पनि लागू हुने स्थानीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दछ ।
सफ्टवेयरको कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कि Sriyog.Com ले यस EULA सम्झौताको उल्लङ्घन हो ।
Sriyog.Com संग तेस्रो पक्षले सफ्टवेयरको उपयोग गर्न लाईसेन्स प्रदान गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।
नेपालको कानुन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघनको मामिलामा तपाइँ जिम्मेवार ठहरिनुहुनेछ ।
यो EULA सम्झौता तपाईले पहिलो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु भएको मितिबाट प्रभावी हो र समाप्त नभएसम्म जारी रहनेछ । तपाईले यसलाई कुनै पनि समयमा Sriyog.Com लाई लिखित सूचनामा समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाईं यो EULA सम्झौताको कुनै शर्त पालना गर्न असफल भएमा यो तुरुन्तै समाप्त हुनेछ । यस्तो समाप्ति पछि यस EULA सम्झौता द्वारा प्रदान इजाजतपत्र तुरुन्त समाप्त हुनेछ र तपाईं सफ्टवेयरको सबै पहुँच र प्रयोग रोक्न सहमत हुनुहुन्छ । प्रावधानहरू जुन उनीहरूको प्रकृतिले जारी रहन्छ र बाँच्दछ भने यस EULA सम्झौताको कुनै पनि समाप्तिबाट बच्नेछ ।
सम्झौताले तपाइँ र Sriyog.Com बीच तपाइँको एप्लिकेसनको प्रयोगको सम्बन्धमा सम्पूर्ण सम्झौता गठन गर्दछ र तपाइँ र Sriyog.Com बीच सबै पूर्व र समकालीन लिखित वा मौखिक सम्झौताहरूलाई हटाउँछ ।
तपाईंमा थप सर्तहरू र सर्तहरूको विषय लागु हुनेछन् यदि तपाईंले Sriyog.Com का अन्य सेवाहरू खरीद या प्रयोग गर्नुभएमा, जुन Sriyog.Com लेतपाईंलाई प्रयोग वा खरीदको समयमा प्रदान गरनेछ ।
Sriyog.Com को EULA
EULA सेप्टेम्बर ०१, २०१९ अपडेट गरिएको
प्रतिलिपि अधिकार (c) २०१९ श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा. लि.
पोखरिया, विराटनगर (Regd.)
आलोकनगर, काठमाडौं (Corp.)
कल गर्ने समय NST: 10 AM to5PM